Kugamuchirwa ku ChildhoodBiography Terms and Conditions Page
musha Mamiriro uye Mamiriro
Ndokumbirawo kuti muverenge Mitemo neMamiriro aya zvakanyatsonaka. Aya mazwi uye mamiriro ane chekuita nekushandiswa kweChidikiBiography zvemukati. Kuwana kwako nekushandisa zvemukati mewebhu webhusaiti zvakagadziriswa pakubvuma kwako uye kutevedzera iyi Mitemo. Aya mazwi anoshanda kune vese vashanyi.
Basa redu rinogona kunge rine zvinyorwa kune mawebhukiti evechitatu-masangano kana maitiro asina hurumende kana kutungamirirwa ne ChildhoodBiography.
ChildhoodBiography haina simba pamusoro payo, uye haitauri mutoro we, zvinyorwa, marongerwo ehupfumi, kana maitiro emumwe webhutatu hwemasayiti kana mabasa. Iwe unowedzera kubvuma uye kubvumirana kuti ChildhoodBiography haisi kuzova nemhosva kana kutongerwa, zvakananga kana kuti zvisina kurongeka, kune chero kukanganisa kana kurasikirwa kunokonzerwa kana kuti kunonzi kunokonzerwa kana kuti maererano nekushandiswa kana kuvimba pane zvinyorwa zvakadaro, zvigadzirwa kana mabasa anowanika kana kuburikidza chero masayiti akadaro kana masangano.
kugumiswa: Isu tinogona kupedza kana kumisa kusvikidzika kweShutano yedu pakarepo, pasina chiziviso chisati chaitika kana chiremera, chero chikonzero chipi nechipi, kusanganisira pasina kuregererwa kana iwe ukaputsa Mitemo.
Mutemo Unodzora: Aya Matemu achatongwa nekududzirwa zvinoenderana nemitemo yenyika, pasina hanya nekupokana kwayo kwemitemo.
Kutadza kwedu kuita chero kodzero kana kupihwa kweMitemo iyi hakuzotorwa sekuregererwa kwekodzero idzodzo. Kana chipi nechipi cheMitemo iyi chichinzi hachishandi kana kusatevedzwa nedare, zvakasara zveMitemo iyi zvicharamba zviripo.
Mitemo iyi inoumba chibvumirano chese pakati pedu maererano neSevhisi yedu, uye inotsiva nekutsiva chero zvibvumirano zvatingave nazvo pakati pedu maererano neSevhisi.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve Matemu aya, ndapota taura nesu uchishandisa fomu riri mune yedu kuonana peji.